Zon'ny Zaza - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Raha toa ka tsapanao ny jaly sy tomany
Niainan-drazantsika tamin'ny fanjanahantany
Dia ataovy an-tsaina tsara ny jaly farahidy
Tratran'ny tsy fidiny fony tamin'izany.
Toy ny zaza very zo
Dia aoka ho tsapatsika ny hirifiry mafy
Iainan'ireo zaza tsisy Ray mpiahy
Fa faran'izay miafy
Tsy misy intsony Reny
Hiangotiana sy hiteny.
Ataovy an-tsaina fa ny zaza manan-jo hiaina am-pilaminana
Manan-jo hihinana sakafo tsara sy ampy
Hitafy ihany koa na mangatsiaka na mafana.
Manan-jo hanarina raha misy hadalana.
Ny zaza zaza foana mbola tsy nandalina sy niaina fijaliana
Ka aza am-pahoriana na setraina avy hatrany asa sy ny tariny
Fa mbola tena maminy ny miara-milalao amin'ny zaza toa azy
Ka raha mety azafady
Tsy mbola mendrika azy ny hiaina toa olon-dehibe.
Moa ho zakanao ny jaly entin'iny
Moa ho tantinao ny sentom-pahoriany?
Fotsiny omeo ny zo sy fiadanany
Ny feno fa tsy tapany ny tena fahasambarany
Mila Ray sy Reny hitantana ny tanany.
Ny zo feno ananany tsy mila analana
Ny torolalana sy teny raha misy hadalàna
Izay no didy sy lalàna hiainany milamina
Ny zony tena azy fa tsy zo indrakindramina.
Ny hafatro dia tsotra e!
aza atao ho hitaniny ny mafy nentinao;
Fa ny ao an-tsaina hatreto dia mbola be lalao
Mbola votsa saina tsy mahazaka ny onjan-tany
Ny zaza a! zaza ihany.